IINGCAMANGO EZINGAMA-79 EZIPHAMBILI ZETATTOO ZERUNE- [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
Iingcamango ezingama-79 eziPhambili zeTattoo zeRune- [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Rune Iitattoo zivuselela uhlobo lwakudala lweesimboli zeViking kubalandeli banamhlanje abanenkani. Ulwimi lwakudala lubotshelelwe ngaphakathi ngentsingiselo enzulu ukuba nawuphi na umntu uya kuyithanda.
Ii-Runes ziimpawu ezintle zenkcubeko ende elahlekileyo, kwaye ezi icon zineempawu ezintle kwifom ye-inki.
Rune nganye inentsingiselo eyahlukileyo, kwaye iingcali ezininzi zobugqi zikholelwa ukuba ezi zoyilo zinxibelelene nomlingo omnyama wexesha leViking.
Uninzi lwezi mfanekiselo zinamandla zinikwe iintsingiselo ezintle, kwaye zinokusetyenziswa njengepela elingcwele lokuqinisekisa iintsikelelo. Nangona kunjalo, ezimbalwa zazo zinokuqwalaselwa njengeziqalekiso. Ngolu lwazi, unokuyilola itattoo yakho ukuba ihambelane nefilosofi yakho.
Ngokwenyani kukho iiseti ezimbalwa zeeruni ezaziwayo kwizazi ngembali, kwaye ulwimi ngalunye olwahlukileyo luqhotyoshelwe kwiintsomi ezahlukeneyo zaseJamani. Ngenye indlela kwiinguqulelo zeViking ezaziwayo, ungazama i-Orlanthi runes endaweni yoko.
Ngenxa yokuba aba bantu babekrolwe ematyeni, bagcinelwe ukuba sibathande namhlanje. Ukuqhagamshela kwabo kwi-sediment kuye kwabangela ukuba babonakale phakathi kwezinto zakudala. Nokuba yeyiphi na ekhuthaza ukuba utyekelo lwakho lwe-rune tattoo, le khathalogu ye-stellar ngokuqinisekileyo iya kukhuthaza inkuthazo yokuqalisa.
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-207 + zeViking Tattoo
1. Iziphumo zenyama Rune iiTattoos
Indlela ethandwayo yokwenza umvambo ibandakanya i-inki emnyama nengwevu kunye nesicelo esithile sokwenza umxholo womfanekiso oqingqiweyo elityeni elele phantsi kolusu lomntu onxibileyo. Igcisa elinetalente lingasebenzisa izithunzi ezilahliweyo ukongeza ubunzulu kwisiqwengana, ngelixa ukufiphaza okuthe tye kunye nemigca echanekileyo isetyenziselwa ukuphinda ubume bamacwecwe amatye. Le ndlela yeyonaUyaphumelela xa uyilo olusetyenzisiweyo njengale mijelo leyokujongeka ngathiinokuvela ngqo kwindawo yezinto zakudala eLapland.
2. IiTattoos zeNtsundu eziMnyama
Ngelixa abanye abantusebenzisa amandlaI-inki yombala yokwenza uyilo pop, abanye bakhetha isiphumo esenziwe nge-inki emnyama egcweleyo ime ngokuchasene ne-canvas engenanto.I-inki emnyama ebonakalayo isebenza ngakumbi kwezi tatto ze-rune: kwabanye abantu, ukugxila kwezi tatto kufuneka kubeivuliweuphawu uqobo, kunyekwayeKungcono usebenzise isikimu sombala esiqingqiweyo esivumela uyilo ukuba luzithethele ngokwalo kunokuba luzidibanise ngombala kunye neenkcukacha.
3. Umbala oHlanganisiweyo weRune Tattoo Designs
yakhiwe kwibhokisi yeencwadi nakwidesika
Njengokuba abanye abantu bekhetha iithoni ezingaphantsi inki emnyama sebenza, njengokuba abantu abaninzi befuna iitattoo zabo ukuba zixhume kulusu, kwaye imibala eqaqambileyo yindlela entle yokufezekisa oku.I-inki ebomvu ngokuthe ngqoibalaseleukhetho kwezirune tattoos ngenxa yobundlongondlongo bayo kunye nokunxulumana kwayo nembali yamagorha eViking avela eNorNdiyaziinkcubeko.Ezi tattoos ziyimizekelo emihle yendlela inki yombala enokuthi ifakwe ngayo ngempumelelo kwii-rune tattoos.
4. IiTattoos ezilula zeRune
Ezi Norseii-runes zilungele iitattoos ezilula. Ngelixa ikhonangokuqinisekileyo intoukuze kuthiwe iinkcukacha ezintsonkothileyo, iimilo eziqaqambileyo kunye noyilo olulula lwezi runes luyaphuculwa ngokwenziwa okungangxengwanga.Isicwangciso esinye esisetyenziswa ngabantu abathile ngee-tatoo ze-rune kukuhamba okukhulu, kusetyenziswa usetyenziso olukhulu lweziiimiloukwenza umvambo we tattoos lonto iyabonakalangaphandle koyilo olulula.
5. IViking Compass Rune IiTattoos
Ikhampasi yeViking, okanyeHelm Yoloyiko(Ægishjálmr), luphawu lwakudala lwaseNorse ekukholeleka ukuba lukhankanyiwe kwi-sagas Viking esetyenziswa ngamagorha njengeprotumtsalane osebenzayo.Kwinkcubeko yaseNorse antlokobathumela isigcina-ntloko, kwaye ngelixa abanye besithi i-Helm ye-Awe yayiyinto eyiyo,uninziabantu bayakholelwayiyoukuba ngumlingo, ukuphosa ukukhusela amaqhawe. Ezi iisimboli ezizodwa ezenzelwe ukubetha iitatto ezikhupha imifanekiso yesiko lobuhedeni nangobukrakraIiViking.
6. IiTattoos zemveli zaseNorse
enye indlela yokucinga ngeminyango yekhabethe
Ezi tattoos zemveli zaseNorse zisebenzisa umsebenzi ogqamile kunyeinani leiindlela ezahlukeneyo zokwenza isicelo, kubandakanya ukufakelwa kwe-stipple kunye ne-inki emnyama egcweleyo ngokupheleleyo,ukwenza ezi zoyilo zibalaseleyo. Iindlela ezininzi zokubaleka kunye neempawu zeNorse ziyasetyenziswa kwezi tattoos, kubandakanya imifanekiso enesitayile seedragons kunye nezilwanyana zasentsomini kunye nale glyphs yomlingongeipheleteezi ziluhloboiziqwenga.
7. I-Norse Mythology Runic Tattoos
Abantu baseNorse babeneentsomi ezintsonkothileyo kunye neentsomi ezazisetyenziselwa ukuchaza ilizwe elibangqongileyo kunye nokwenza umbono wehlabathi owawunxibelelene ngokungenakulinganiswa nemozulu embi yaseMntla, kunye nenkcubeko yabo yamagorha.
Umnyama kunye negrey lighthouse tattoo
Ezi tatto zibandakanya inani leesimboli kunye nabalinganiswa, kubandakanya amahlungulu,eyiphizazithathwa njengezihlobo zika-Odin, iingcuka ezazinxulumene nesigebenga esoyikekayoFenrir, kunye nokunxibelelana ezintathuunxantathueyaziwa njengeValknut.Yonke yeezi zinto zahlukileyo zenzela ii-tattoos ezintle ngenxa yamagcisa anetalente.
8. Rune Iitattoo eziBonisa indawo eNgekhoyo
Kuxhomekeka kwithoni yolusu lomntu oyinxibileyo, indawo engalunganga Ingasetyenziselwa ukwenza uyilo oluthile. Ngokubandakanya i-inki emnyama kunye nobuchule bokwenza umnyamas(ngokukodwa ukubetheka okomileyo) ezi tattoos zisebenzise ngempumelelo indawo engalunganga njengecandelo lokunceda yoyilo pop.Elula kodwa enamandlaUhlobo lweembaleki zeNorse zenzaIzifundo ezigqwesileyo zale ndlela.
9. IiTattoos zeNeo zesiko
Imibala edlamkileyo kunye neenkcazo ezibonisa isibindi Neo-yemveli Ukwenza umvambo kunokufikelela kwinqanaba elingakholelekiyoIinkcukachakwaye ezi tattoos zibonisa ukuba ezi zimbo zingaguqulela njani kuyilo lweerune zeNorse.Nokuba ziikhakhayi, iidragons okanye uyilo oludibeneyo iimilo zejiyometri , Indlela ye-neo-yesiko igqibelele kweziIitattoos.
izimvo zocingo lwabucala ngasemva kwendlu
10. Dotwork Rune Iitattoos
Ukukhulayentsingiselo yethambousebenzisa ngocoselelo ukusetyenziswa kwamachaphaza kuxinaniso olwahlukeneyo oluvela kwisithuba esibi kuyo yonkeindlelaukugcwalisa ngokupheleleyodMnyama ukwenza iitattoos.Ezi runes zaseNorse zizifundo ezigqibeleleyo zale ndlela yokubulela kubomi babo bamandulo nobumangalisayo kunye nokubanakho kwegcisa elinetalente lokusebenzisa obu buchule bokuqhayisa ukudala ubunzulu kunye nemvakalelo yokuthungwa kwe-weather.
11. I-Viking Warrior Tattoos equkethe iiRunes
Mhlawumbi olona phawu lubonakalayo kwangoko lwenkcubeko yaseNorse, umkhosi weViking onamandla sisifundo esifanelekileyo sokubandakanyaezi zoyilo zeerune. Enkosi kuithubangaphandleukudibanisa imibala kunye nokwenza iinkcukacha ezintsonkothileyo ezibonelelwa ngala manani,Akumangalisi ukuba benze ezinye zeetattoo ezilungileyo esizibonileyo ukuza kuthi ga ngoku.
12. Runes kwiZandla kunye neMinwe Tattoos
Zimbalwa iindawo onokufumana kuzo umvambo okhoyo kwangokoibonakala njengezandla neminwe.Ezi glyphs zilula ngokufanelekileyo zikulungele ukubekwa kwindawo ebonakalayo kunyeNyone ofumana ezi runes zeNorse inked ezandleni zabo uya kubonisa kwangoko ukubaluleka kwezi mpawu zomlingo ebomini babo.
Hlaziya ii-FAQ zeTattoo
Zithetha ntoni ii-rune tattoos?
Ixesha ligijimaibhekisa kwiqelaOonobumba abaziwa ngokuba zii-runic alphabets ezisetyenziswe ziilwimi ezininzi zaseJamaniphakathiuhlobo olubhaliweyo.Nangona kunjalo, namhlanje xa abantu besithi rune, ngakumbi kwilizwe leIitattoo, zibhekisa kwiNorseisiko leesimboli abaninzi bakholelwa ukuba babambe amandla omlingo,oko ikukuthiIngqinwa bubungqina bezinto zakudala kunye nobungqina bendalo.
Ngelixa ukusetyenziswa kwabo koqobo kunokuba nakowayenayoIinjongo zokomoya kunye nezobugqi, kumaxesha anamhlanje ezi iisimboli eziyimfihlakalo zisetyenziswa ngakumbi njengendlela yokubonisa ukuzingcalowo uyinxibayoNorseIlifa lemveli.Ezi zinamandlaiisimboli zenza iiTattoo ezigqwesileyo, kubandakanya amajoni eViking, iingcuka kunye neebhere, kunyesebenzisaingiintlobo ezahlukeneyo zezitayile kunye nokusetyenziswa ukwenza iziqwenga ezibethekileyo eziqinisekileyo zokujika iintloko.
Ngaba ujonge iesile elibi ngakumbi iViking iitattoos? Cofa kwiikhonkco ezingezantsi ukuze ufumane iigalari ezintle zaseNorse:
Iingcamango zeValkyrie Tattoo
Uyilo lweTatoo yeOdin
Iimpawu eziphezulu ze-57 ze-Odin zeRavens
Iingcamango zeViking Compass Tattoo
Ixabiso eliphakathi le tattoo yomkhono wesiqingatha
Phakathi kwamadoda amabini ajikelezayo
amagumbi okutyela aneentsimbi zesitulo
umvambo wecala kwicala lentamo
emnyama kunye nengubo yesiko lemveli